Max’med Caruus “majiro ciidan ka tirsan Xisbul Islaam oo kooxda Riddada isku dhiibay iyaga ayaa jabay oo kala carar ah sidee Mujaahid Riddo ugu biiraa”. | Halganka Online
Max’med Caruus “majiro ciidan ka tirsan Xisbul Islaam oo kooxda Riddada isku dhiibay iyaga ayaa jabay oo kala carar ah sidee Mujaahid Riddo ugu biiraa”.
Posted on Febraayo 27, 2010 by halganka
Sarkaal sare oo ka tirsan Ururka Xisbul islaam ayaa beeniyey war maanta ka soo yeeray Dowladda KMG ah kaas oo sheegayey in ciidamo Xisbul islaam ka tirsan ay isku soo dhiibeen Dowladda KMG ah ee AMISOM la shaqaysa.
Sheekh Maxamed Caruus madaxa howlgalada ciidanka Xisbul islaami ayaa beeniyay warka ka soo yeeray Dowlada KMG ah isagoona ku sheegay war niyadda loogu dhisayo baxsadka dowlada KMG ah oo maalmihii la soo dhaafay Mujaahidiinta Shabaab isku dhiibayay.
“Runtii waxaas ka soo yeeray kooxda Riddada Idaacadda ayaan ka maqlay majiro ciidan keenaa oo dhankaas u talaabay, ma jiro Mujaahid Riddo ku biiraya qoladaasi Riddada ah Caqiidada ayaan isku dagaashanahay mana dhici karto in ciidankeena wanaagsan Riddo ugalo iyaga ayaa doonaya in ay kala cararkooda ku daboolaan waxa ay sheegteen” ayuu yiri Caruus.
Sheekh Max’med Caruus wuxuu sheegay in 7 nin ee lagu soo bandhigay Wadajir ay yihiin ciyaal food-dheerayaal ay DKMG ah usoo geliyeen dareeska ciidanka islamarkaana ay doonayaan in ay shacabka ku khaldaan.
Ururka Xisbul Islaam ayaa mar kale ku goodiyey in ay sare u qaadayaan dagaalada ay kula jiraan AMISOM iyo dowlada KMG Soomaaliya, dowladda shariifka oo ku daciiftay dagaalada ay Mujaahidiinta kula jiraan ayaa dhowr jeer adeegsatay dacaayado ay ku sheegayaan in ciidan Islaamiyiinta katirsan isku soo dhiibeen.
Dowladda KMG ah ayaa ku fadeexowday been weyn oo ay sanadkii la soo dhaafay faafisay markii ay Iclaamka u soo bandhigtay nin ay ku sheegtay in uu ka tirsanaa Shabaabka Jubbooyinka taas oo dhalisay in dadku ay rumaysan waayaan hadalada dowladda.
« Sheekh Jamac C/Salaan oo ka mid ahaa Hay’addii Culimada Musaalaxada oo Muqdisho ka bilaabay muxaadarooyin ka dhan ah Dastuurada ay dejistaan Wadamada Reer Galbeedka sida kan TFG “Warbixin”. Raali gelinta uu bixiyey Wargeyska Politeken ma mid uqalantaa dadka Muslimiinta ah?? »